Warbixinta talaalka karonaha ee degmada Lørenskog - Lørenskog kommune
Warbixinta talaalka karonaha ee degmada Lørenskog
Masuuliyiinta caafimaadka wadanka ayaa siiyey degmooyinka jadwalka cidda laga fuudhyeelayo marka dadwenaha la talaalaayo. Kaas oo degmada lørenskogna uraacayso siday u kala horeeyaan.
Dadka ku nool goobaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo iyo kooxo shaqaalaha caafimaadka ka ah oo si gaar ah la soo xulay.
85 jir ama kaweyn
65-74 jir. Dadka xanuunku khatarta ku yahay ee da doodu u dhaxayso 18-64 jir
55-64 jir. Leh xanuuno hore
45-54 jir leh xanuuno hore
18-44 jir leh xanuuno hore
18-24 jir & 40-44 jir
Masuuliyiinta caafimaadku ku talinayaan in la talaalo caruurta iyo dhalaanka 16 ka yar. Talaalkan la soo saaray laguma tijaabin dhalaanka 18 sano ka yar. Dhif iyo naadir baanay dhacdaa in caruurtu aad ugu xanuunsadaan karonaha.
Hadii aanad degenayn Lørenskog, waxaad iska diiwaangelin kartaa safka talaalka loogu jiro ee boggen. registrere deg i vaksinekø på denne nettsiden.
Markaas waxaad dooraneysaa: kumeel gaar ayaan degmada u deganahay. Waxaad kaloo boggen safka talaalka gelin kartaa xubnaha qoyskaaga.